Soomaalida Mareykanka oo dacwad ka gudbiyay shirkada Amazon – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTASoomaalida Mareykanka oo dacwad ka gudbiyay shirkada Amazon
November 24, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on Soomaalida Mareykanka oo dacwad ka gudbiyay shirkada Amazon
Soomaalida dalka Mareykanka ee ku nool Magaalada Minnasota ayaa dacad ka dhan ah Shirkada Amazon ka gudbiyay dacwad ka dhan ah iyagoo ku eedeeyay in ay si uun u heyb soocaan.
Dacadaan ayey markii hore gudbiyeen shaqaalaha shirkada ee Soomaalida ah iyagoo sheegay in ay ku faquuqaan diintooda maadama sida ay sheegeen ay dul dhigeen amaro adag oo si qeyxan kaga hor imaanaya in shaqaalahooda ay salaada dukadaan xiliga ay shaqeyanayaan.
“Waxaa jira cadaadis si gaar ah shirkaan Soomaalideena u saarto mana ahan wax aan aqbali karno madama aan ku noolnahay dal xuriyada aad looga ixtiraamo, laakiin xaqiiqda ayaa ah in aan aad u baqano oo aan ku fikirno goormaad shaqadaan la idiinka cveyrin doonaa maadama ay marar badan inooga digeyn in aan dukano xiliyada shaqadana inagana aynu ka dhaga adeygnay” ayuu sheegay Maxamed nin magaciisa ku sheegay oo ka mid ah shaqaalaha soomaalida ah ee Shirkadaasi amazon.
Soomaalida qurba joogta ah ayaa ee ee ka shaqeysta dalalaka ay ku noolyihiin ayaa marar badan marti u noqda midab takooor.
Pakistan oo Soomaaliya Maalgashi ku sameyneysa
705,252 total views, 2,469 views today
705,252 total views, 2,469 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
705,128 total views, 2,469 views today
705,128 total views, 2,469 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
705,158 total views, 2,469 views today
705,158 total views, 2,469 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
705,220 total views, 2,469 views today
705,220 total views, 2,469 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
705,274 total views, 2,469 views today
705,274 total views, 2,469 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]